INFO - Sicily Tourism
AIZA NO HIjanonana
Eto ianao dia hahita fampahalalana momba ny dianao manaraka any Sisila. Inona ny mahita, ny hatao, ny fomba hahatongavana any Sisila. Soso-kevitra momba ny fomba hifidianana ny toerana hipetrahana miaraka amin'ny fifantenana trano fonenana.
Sisila miaraka amin'ny toerana misy azy ao afovoan'ny Mediteraneana dia efa ela no toerana nihaonan'ny kolontsaina samihafa sy niroboroboan'ny sivilizasiona..
Nandalo tany Sisila avokoa ny mponina teo akaiky teo na ho ela na ho haingana: Fenisianina, Grika, Romana, Arabo, frantsay, Espaniola, Italiana (ENY! , mpanafika koa izy ireo ..). Na ny Amerikana aza dia nanafika vao haingana nandritra ny Ady Lehibe Faharoa. Miorina amin'ny tantarany i Sisila ankehitriny dia fonenan'ireo mpifindra monina maro avy any Afrika Avaratra, Albania, Romania sy ny firenena hafa. Hatramin'ny Vondrona Eoropeana dia misy Eoropeana Avaratra vitsivitsy mifindra monina eto.
Sisila dia lasa Kalifornia any Etazonia.
Ny mahasarika ny olona eto dia ny toetrandro mahafinaritra, ny hatsaram-panahin’ny Siciliana, ny sakafo tena tsara, ny hatsaran-tarehy voajanahary, ireo tranoben'ny maritrano manomboka amin'ny fiangonana baroque ka hatramin'ny tempoly grika. Vitsy no mahalala fa betsaka kokoa ny tempoly grika eto Sisila noho ny any Gresy. Miharihary fa nifidy zavatra tsara kokoa ny Grika fahiny nandao ny tany be tendrombohitra toa an’i Gresy: Sisila! Na ankehitriny aza, ny fototarazony dia velona any amin'ny sasany amin'ireo Siciliana ankehitriny. Ity tranokala ity dia eto mba hanampy anao hanomana ny fialan-tsasatrao any Sisila fa tsy hankaleo anao amin'ny tantaran'i Sisila. Raha liana amin'ny arkeolojia any Sisila ianao dia azonao atao ny mijanona eto mandrakizay. Sisila dia Nosy lehibe voahodidin'ireo nosy madinika maro. Koa mitandrema: Raha tonga herinandro ianao dia tsy ho afaka hitsidika azy rehetra. Ary tsy eritreretintsika akory ireo nosy kelin'i Sisila. Ity tranonkala ity dia mikendry ny hanampy anao hahita ireo niches tsy trandrahin'ny fizahan-tany faobe
Te-hitsidika an'i Sisila? Manomboka mikaroka ny Ny tendrony atsimo atsinanan'ny Baroque Sicily Ragusa Ibla sy ny Riviera
Aza adino ny mitsidika pejy hafa amin'ny tranokala aiza no hijanonana mba toro-hevitra sy toro-hevitra.
Mitadiava hotely sy maro hafa...
© 2022 Sicily Tourism	| Ampandehanin'i Outstandingthemes